ရန်းဂနစ်ဟာ ဘယ်လိုအသင်းမျိုးကို တည်ဆောက်ပေးမလဲ၊ ယူနိုက်တက်တို့ ဒီနှစ် ဆုဖလား ဆွတ်ခူးနိုင်မလားဆိုတာတွေကို ပြောပြလိုက်တဲ့ ဂယ်ရီ ပေါ်လစ္စတာ - xyznews.co
ရန်းဂနစ်ဟာ ဘယ်လိုအသင်းမျိုးကို တည်ဆောက်ပေးမလဲ၊ ယူနိုက်တက်တို့ ဒီနှစ် ဆုဖလား ဆွတ်ခူးနိုင်မလားဆိုတာတွေကို ပြောပြလိုက်တဲ့ ဂယ်ရီ ပေါ်လစ္စတာ
December 4, 2021 - by Editor
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းရဲ့ နောက်ခံလူဟောင်း တစ်ဦးဖြစ်သူ ဂယ်ရီ ပေါ်လစ္စတာ က အသင်းရဲ့ နည်းပြသစ် ဖြစ်လာသူ ရဲ့လ်ဖ် ရန်းဂနစ် အနေနဲ့ စည်းကမ်းပိုင်း တိကျ ကောင်းမွန်နေဖို့ လိုအပ်ကြောင်း အကြံပေး တိုက်တွန်း သွားခဲ့လိုက် ပါတယ် ။
ယူနိုက်တက်တို့ ပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းက လက်စတာ ၊ လီဗာပူး ၊ မန်စီးတီး အသင်းတွေကို ဂိုးပြတ် ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့နောက် ဖိအားတွေအောက် ကျရောက်ခဲ့တဲ့ ဆိုးလ်ရှားဟာ ဝက်ဖို့ဒ် အသင်းကိုပါ4– 1 နဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့နောက် အသင်းနဲ့ လမ်းခွဲခဲ့ရပါတယ် ။
အဲ့ဒီနောက် ကာရစ် က ဗီလာ ရီးယဲ ၊ ချဲလ်ဆီး ၊ အာဆင်နယ် အသင်းနဲ့ ပွဲစဉ်တွေကို ယာယီ နည်းပြ အဖြစ် ကိုင်တွယ်ခွင့် ရရှိခဲ့ပြီး0–2၊ 1 – 1 ၊3–2ဆိုတဲ့ ရလဒ်ကောင်းကို ဆက်တိုက် ရယူပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ အခုတော့ ကာရစ်ဟာလည်း အသင်းမှ ထွက်ခွာသွားပါပြီ ။
ဒါ့ကြောင့် ခရစ္စတယ် ပဲလေ့စ် အသင်းနဲ့ ကစားရမယ့် ပွဲစဉ်ကို ယာယီ နည်းပြသစ် ရဲ့လ်ဖ် ရန်းဂနစ် စတင်ကိုင်တွယ်ဖို့ သေချာသွားခဲ့ရပါပြီ ။ ထို့အတူ သူဟာ ဘယ်လို အသင်းမျိုးကို တည်ဆောက်ပေးမလဲ ၊ ဘာတွေ လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ ။
အခုတော့ ယူနိုက်တက် ကစားသမားဟောင်း ဂယ်ရီပေါ်လစ္စတာ က ရန်းဂနစ် ဟာ ကစားသမားတွေကို မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းအတွက် တိုက်ပွဲဝင်လိုကြတဲ့သူတွေ ဖြစ်အောင် တွန်းအားပေးနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ကြောင်း ၊ လက်ရှိ အသင်းဟာ ဆုဖလား ဆွတ်ခူးဖို့ ရေပန်းစားဦးမှာတော့ မဟုတ်ကြောင်း ပြောခဲ့လိုက်ပါတယ် ။
” ရန်းဂနစ်ဟာ အသင်းဆီ ရောက်လာပြီး စည်းကမ်းပိုင်း တင်းကြပ်စေလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ် ။ သူက ဒါကို သေချာပေါက် လုပ်ပါလိမ့်မယ် ။ ပြီးရင် သူ ကစားစေလိုတဲ့ ကစားဟန်ကိုပါ ယူဆောင်လာပါလိမ့်မယ် ။ အသင်းသားတွေလည်း သူက ဘော့စ်ပဲ လို့ လက်ခံကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ် ”
” သူက လူတွေ အထင်ကြီးအောင် လိုက်လုပ်မယ့် နည်းပြမျိုး မဟုတ်ဘူးလို့ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ် ။ သူက နာမည်ကျော်ကြားပြီးသား နည်းပြ တစ်ဦးပဲလေ ။ သူက ယူနိုက်တက် အတွက် တိုက်ပွဲဝင်လိုကြတဲ့ အသင်းမျိုး တည်ဆောက်ရင်း အဲ့ဒီ ကစားသမားတွေက အသင်းအတွက် နိုင်ပွဲတွေ ယူဆောင်ပေးပါလိမ့်မယ် ”
” လက်ရှိ အချိန်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ ပရီးမီးယားလိဂ် ၊ ချန်ပီယံလိဂ် ဖလားတွေကို ဆွတ်ခူးနိုင်ဦးမှာ မဟုတ်သေးဘူးလို့ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ် ။ FA ဖလားရော ? လက်ရှိ အသင်းက ရန်းဂနစ် လက်အောက်မှာ ဆုဖလား တစ်ခုကို ဆွတ်ခူးပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်နေလို့ ရနိုင်တဲ့ အစုအဖွဲ့ တစ်ခုပါ ”
” ဒါ့ကြောင့် ဆုဖလား ဆွတ်ခူးရေးဆိုတာ impossible ပဲလို့ ကျွန်တော် ပြောမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး ။ ဒါပေမဲ့ ဒီမှာက ပိုကောင်းတဲ့ ပုံစံတွေ ရနေတဲ့ အသင်း ရှိနေပါသေးတယ် ။ ဒါ့ကြောင့် လက်ရှိအချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဖလားတွေ ဆွတ်ခူးဖို့ ရေပန်းစားနေဦးမှာ မဟုတ်သေးပါဘူး ” လို့ ပေါ်လစ္စတာ က ပြောခဲ့လိုက်ပါတယ် ။
ဘာဆာလို ဒုက္ခတွေ့နေတဲ့ အေတီကို ၊ ယူနိုက်တက်မှာရမယ့် ဒီယွန် ရဲ့ လုပ်ခလစာ ၊ ပြီးမြောက်ဖို့ နီးစပ်လာတဲ့ အပြောင်းအရွှေ့‌ တွေနဲ့ . . . ယနေ့အတွက် နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ
Weekly Special: Liverpool ရဲ့ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ရာသီ နည်းဗျုဟာ အပြောင်းအလဲ နဲ့ ကစားပုံကို ချဉ်းကပ်လေ့လာခြင်း
ဘိုင်ယန် ၊ ချဲလ်ဆီး တိုနဲ့ ရော်နယ်ဒို သတင်းထွက်လာတဲ့ အပေါ် ပြတ်ပြတ်သားသား တုန့်ပြန်လိုက်ကြတဲ့ ယူနိုက်တက် ပရိသတ်များ
Previous Article ဆိုးလ်ရှားနဲ့ နှစ်နာရီလောက် ဖုန်းပြောခဲ့ကြောင်း ဖွင့်ဟလိုက်တဲ့ ရန်းဂနစ်
Next Article ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ်လှန်ထောင်ပြီး ၊ အနီးကပ် ပြိုင်ဖက်တွေကို ချဲလ်ဆီးတို့ ကျော်တက်ခွင့် ပေးခဲ့တဲ့ ဝက်စ်ဟမ်း ၃ – ၂ ချဲလ်ဆီး ပွဲမှ ခြင်္သေ့ပြာတို့ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်များ ( Ratings )